“Waan ku nafisay inaan wax ka qoro kufsigi la ii geystay” – Michella Koela | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Afrikaan.so — June 15, 2020
Michella Koela oo ah gabar qoraa ah oo filimaantana jisha ayaa sheegtay iney taariikhda kufsiga ee loo geystay oo ay filim ka qortay uu culeys badan uu maskaxdeeda ka riday. Michella waxay aad ugu caan baxday oo lagu yaqaannaa flimkeeda taxanaha ah ee loo yaqaanno ‘Chewing Gum’.
Xilliga wuxuu ahaa xilli ay Michella qoreysay qaybta labaad ee filimka taxanaha ah ee ‘Chewing Gum;. Maalin maalmaha ka mid ah inta ay qoraalka waddo ayey dhexda fasax ka gashay. Waxayna billaawday iney saaxibaddeed arrima badan ka sheekeystaan.
Waxay markiba xusuusatay arrima badan oo nafteeda madow badan geliyo isla-markaana noolasheeda utun ku reebay. Subixi marka ay hurdada ka soo toostay waxyaabaha qaar sida riyadi ayey u xusuusaneysay. Waxayna dareentay in khamri ay cabbeysay waxyaaba maanka dooraya looga daray sidaana lagu kufsaday.
Noolashii mugdiga ahayd ee kufsiga ka soo maray ayey ka qortay qoraal filim oo ay ugu magac dartay ‘Inaan kuu baab’iyo ayaa laga yaabaa ama ‘ I may destroy You’.
Qoraalki kufsiga loo geystayna ka qortayna waxay u beddeshay filim ay iyadu lafteeda jireyso, diyaarintiisuna ay xirfadlayaal kale la kaashato.
Qaybta Filimka uu telefishiinka BBC baahiyey keligeed ayaa jisha.
“Qoraalka ku saabsan kufsiga la ii geystay inaan ebyo waxay igu qaadatay laba sano. Xilligaasina shaqa kale maanan hayn” ayey tiri mar ay Radio News Bit u warrameysay.
“Waxay ahayd xaalad murug badan ilaa iyo hadda waxaan dareemayaa kufsiga in hadda la ii geystay oo kale, balse qoraalka aan ka qoray si aad ah ayaan ugu nafisay” ayey tiri.
Sida ay sheegeyso warbixin ay soo saartay hay’adda Rape Crisis gabdhaha iyo wiilasha ay da’doodu 16 jirka ka sarreyso 20% gabdha iyo ragguna 4% in kufsi loo geysto.
Xogtaasi oo muujineyso oo keli ah dhacdooyinka Ingriiska iyo Wales.
Baaritaan ay BBC-du sameeysayna waxaa lagu ogaaday inta u dhaxeysay 2015-2019, dad gaaraya 2,600 oo qof in khamri ay cabbayeen wax looga daray sidaana kufsi looga geystay. 72% oo dadkaasi ka mid ahna ay yihiin dumar. Xogtaasi oo sida oo kale Ingriiska iyo Wales laga soo uruuriyey.
“Inaan annagu dambiga dusha iska saarno cidna wax uma tareyso”
Michellawaxay filimka ku mataleysaa magaca Erabela iyada oo si la yaab leh filimka u jishay. Inta karaankeeda ahna waxay isku dayeysaa dhibka soo food saaray iney ka baxsato. Matalaadda Erabela-na waxay Michel ku mataleysaa noolasheeda dhabta iyo taariikhda ay iyada iska qortay.
“Arrimaha noocan ah ee xanuunka badan markaan soo xusuusanno waxaan isku daynaa siyaaba kala duwan inaan uga gudubno, waana u halgannaa. Mararka qaarna murug oo keli ah ayaan kaga gudubnaa” ayey tiri.
“Marar qaarna waxaan isku dayeynaa inaan inkirno wixi nagu dhacay” ayey tiri. Gabadha filimka ku mataleyso magaca jilliinka ee Arabela waxay filimka ay qortay kaga warrameysaa cida kufsatay iyo saaxibbadeed sida ay gacan uga geysteen kufsiga loo geystay”.
Saaxibbada Michella ee filimka lagu matalayo waxaa lagu muujinayaa dabeecadaha khaldan ee waxa ay rabaan iyo waxa ay rabin ay ku fulinayaan.
“Dhibki nagu dhacay inaan annagu isasaarno oo aan dambiga dusha saaranno cidna anfici meyso, waxaana loo baahan yahay inaan anngu marweliba wanaagga xigsanno, waana inaan nafteenna raali gelinnaa” ayey tiri.
Waxayna Michella sheegtay dad badan oo filimkan daawado iney wax badan ka faa’idi doonaan.
Maxaa keenay in dunida ay kusii kordhaan kufsiga?
Gabadha filimka ku mataleyso Erabella waxay barteeda Tweeter-ka ku yeelatay taageerayaal aad u badan, iyada oo sumcad aad u weyna heshay. Waxayna heshiis ku gashay in buug loo daabaco. Inkasta oo magac iyo sumcad badan ay heshay haddana xaaladdeedu weli ma deggana.
Filimkeeda ‘I may Destroy You’ Michella waxay ku heshay magac aad u weyn.
Markasta oo dooranno habnoolaleed noo gaar ah faa’idana wey leedahay qasaarana wey leedahay. Noolasha aad dooratana waxaa laga yaabaa wax weliba sidi aad rabtay iney u dhicin. Balse jilidda filimka matalaaddooda waxaa lagu saleeyey iney leeyihiin geesinimo, adag, oo firfircoon. Ayna yihiin si xorriyad iney u noolaadaan naftoodana ay u aaminaan.” ayey tiri Michella.
“Wax kasta oo dhaca noolashayda iney cabsi haleesho ma doonayo. Dadka aan isku da’da nahay waxayaabaha aan ka simannahay waxaa ka mid ah inaan dareenka cabsida iska dul qaadno” ayey tiri.
Tags: "Waan ku nafisay inaan wax ka qoro kufsigi la ii geystay" - Michella Koela
Next post Soomaaliya: Loolankii Sodonkii Sano Ee U Dambeeyay!
Previous post Howgallada Farsamo ee Gaarka ah (Special Tactical Operations)